मोटरसाइकलले २२ महिने बालकको चुडाएको २ वटा औँला जोडिदियो मेडिसिटीले – दैनिक नेपाल न्युज
मोटरसाइकलले २२ महिने बालकको चुडाएको २ वटा औँला जोडिदियो मेडिसिटीले
ललितपुर । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा २२ महिने बालकको मोटरसाईकलको चेनले चुडिएको औलाहरु जोडिएका छन् । करिव ९ घण्टा लामो शल्यक्रिया पश्चात बालकको चोरी र साइली औला जोडिएको अस्पतालका प्लाष्टिक सर्जन डा. संगम रायमाझीले जानकारी दिनुभएको छ । चोरी औला भनिने इन्डेक्स फिंगर सतहवाट चुडिएको थियो भने माझी तथा साईली औला बिचबाट चुडिएको थियो र रक्तसंचार रोकिइ सकेको थियो । दूर्घटना भएको ५ घण्टा भित्रमै शल्यक्रिया शुरु गरिएको चिकित्सकको भनाई छ । वहाँको अनुसार चोरी औला तल्लो भगवाट चुडिए पनि अन्य औला भन्दा यो सुरीक्षत रहेको थियो ।
के गरियो औलामा ?
१. सर्वप्रथम चोरी औलालाई काटियो र रिप्लान्टेसन शुरु गरियो ।
२. त्यसपश्चात, औलाको नसा (फ्लेक्जोर टेन्डोन)संग मात्र जोडिएको साइली औलामा रक्तसञ्चार शुरु गरियो ।
३. माझी औलाको रक्तनलीमा धेरै चोट लागेकाले सो औलाको भने उपचार हुन सकेन ।
अस्पताल तथा चिकित्सकहरुका लागि चुनौतीः
१. जम्मा २२ महिनाको बच्चा भएकाले संरचना निकै सानो रहेको र माइक्रोस्कोपबाट हेरेरनै शल्यक्रिया गर्नुपरेको
२. काटिएको भन्दा पनि पेलिएको घाँउ भएकाले रिप्लान्टेसन कठिन बनेको
१. औलाको प्रत्यारोपण दूर्घटना ६ घण्टा भन्दा पछाडिपनि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि चिसोमा राखिएको हुनुपर्ने
२. टुक्रिएको भागलाई सुख्खा झोलामा बन्द गरी चिसो पानीमा डुबाएर अस्पताल पुर्याउनु फाइदाजनक
३. यस किसिमको उपचार उपलब्ध हुने स्थानबारे जानकारी राख्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुमा प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जन डा.संगम रायमाझी, एनेस्थेसोलोजिष्ट डा. असिम रेग्मी तथा नर्सहरुमा सज्जा पन्त, सुनिता राई, राधिका खत्री, रबिना चौधरी, रबिना चौधरी, मुना गुरुङ्ग रहेका थिए ।
यस किसिमका शल्यक्रियाहरु गर्दा साधारणतया ६ देखि १० घण्टासम्म समय लाग्छ । निकै चुनौतिपूर्ण भएपनि यी शल्यक्रियाहरु विश्वभर रुचाइन्छन् । ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल यस शल्यक्रियाका लागि सक्षम रहेको छ । नेपाल मेडिसिटीमा यसअघि बुढि औला जोडिएको, औलाको टुप्पो जोडिएको तथा चुडिएको हातनै जोडिएको छ जसको अवस्था अहिले सामान्यतर्फ फर्किसकेको छ ।
बेलको फाईदा थाहा छ तपाईलाई ? बेलले कुन कुन रोगको उपचार गर्नु सकिन्छ ? जानी राखौँ